जीएस्, जलोटा र जुगलबन्दी ~ brazesh
October 09, 2011 कान्तिपुर कोसेली, नेपाली, प्रकाशित No comments
म बाघको खोरअघि उभिएको थिएँ । त्यहाँसम्म आइपुगेको पाँचदस मिनेट भइसकेको थियो तर भित्र छिर्ने आँट मलाई आइरहेको थिएन । ढोकामा टिलिक्क टल्केको पित्तलको पातोमा सुन्दर अक्षरले चहकिलो कालो रंगले कुँदिएको थियो, 'एक्ज्युकेटिभ डाइरेक्टर' । त्यो ढोका नबिल बैंकको कार्यकारी अधिकृत जीएस श्रीवास्तवको भव्य कार्यकक्षको थियो ।
मेरो समूहका टोली नेतामा माथि इर्सादुल इस्लाम -आसिफ) नामक अत्यन्त प्रखर मार्केटिङ म्यानेजर, तिनको माथि पीएस लाहिरी नामका महाप्रबन्धक र सबैभन्दा माथि थिए, जीएस श्रीवास्तव । म तिनकै कार्यकक्षको ढोका अगाडि उभिएको थिएँ । साधारणतः उनीसम्म हाम्रो पहुँच हुँदैनथ्यो । भारतीय बैंकिङ क्षेत्रमा समेत नाम कमाएका ती बूढा हेर्दै डर लाग्दा थिए । हेभिवेट बक्सरको जस्तो चौडा कुम, गाँठिएको मोटो ज्यान, माखो पनि चिप्लेर झर्ला जस्तो चिल्लो तालु र ट्वाल्ल परेका अहिल्यै बाहिर निस्केलान् जस्ता ठुल्ठूला आँखा भएका जीएससँग बोल्न आसिफ र पीएस पनि डराउँथे । नबिलमा सबैले सबैलाई नामले बोलाउने चलन थियो, कसैलाई सर भन्नुपर्दैनथ्यो । तर जीएसको उमेर, अनुभव र व्यक्तित्वका कारण नै हुनुपर्छ सबैले 'सर' भन्ने उनी एकमात्र मान्छे थिए । त्यसैले उनको कार्यकक्षमा छिर्नुपर्दा बाघको गुफामा पस्ने भन्ने चलन थियो ।
कुर्सीमा बस्दा मोटो ज्यान फैलिएर होला उनी भीमकाय देखिएका थिए । उनले मोटो चस्मा लगाएर अध्ययन गरिरहेको फाइलबाट पिर्लिक्क राताराता बल्ड्याङ्ग्रे आँखा उठाएर खाउँलाजस्तो गरेर मलाई हेरे अनि खर्खर गर्ने कठोर आवाजमा मेरो धृष्टताको कारण सोधे । मैले मुसोको जस्तो स्वरमा कारण र उनीसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता बताएँ । उनले पेपरवेट उठाएर नहानेपछि मेरो अलि आँट बढ्यो र मैले विस्तारै बिदाको कागज पनि उनको अगाडि सारिदिएँ । उनको घरखेतको तमसुकै हो कि भनेझैं गरी त्यसलाई घोरिएर हेर्दै उनले भने, 'केटो, तँलाई सहरभरि घुमेर को-कोसँग गीत गाउनचाहिँ फुर्सद हुन्छ, अफिस समयमा चाहिँ जरुरी काम आइपर्छ ?'
दूतावासका खाता र बैंकिङसम्बन्धी कामहरू हाम्रो समूहले हेर्ने हुनाले भारतीय राजदूतावास वा सांस्कृतिक केन्द्रको कार्यक्रमको निम्तो आइरहन्थ्यो । त्यस्तै एउटा निम्तो थियो, अनुप जलोटाका गजल र भजनहरू सुन्ने । सम्भवतः त्यो जलोटाको नेपालमा पहिलो आगमन हुनुपर्छ । त्यतिबेला अनुप जलोटा प्रसिद्धिको चरमचुलीमा थिए । उनका डिस्क रेकर्डहरूले एल्भिस पि्रन्सलेका कीर्तिमान उछिनेका कुरा सुनिन्थ्यो । भजनजस्तो नीरस विधालाई आफ्नो जादूमय स्वरका कारण लोकपि्रय र बिकाउ बनाउन सक्ने जलोटाको उपलब्धिबाट म पनि प्रभावित थिएँ । त्यो अवसर त छोड्ने कुरै थिएन । त्यतिबेला कुनै साप्ताहिक पत्रिकामा पनि म लेख्ने गर्थें । त्यसैले जलोटासँग कुरा गरेर एउटा सामग्री तयार गर्ने पनि मेरो लोभ थियो । दूतावासकै माध्यमबाट बिहान याक एन्ड यतीमा त्यो कार्यका लागि पनि चाँजोपाँजो मिल्यो । जलोटासँग कुराकानी सकिएपछि बिदा हुने बेलामा उनले सोधे, 'साँझको कार्यक्रम आउँछौ नि हैन ?'
'साम पिया मोरे रंग दे चुनरिया...'
'बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाउँगीं... बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाउँगी'
अचानक उनलाई के सुर चढ्यो कुन्नि, उनी फेरि श्रोतासँग कुरा गर्न थाले, 'मैले सुनेको थिएँ, नेपालमा सबैजना मिठो गाउनुहुन्छ रे । अब यो पहिलो पंक्ति मैले गाएपछि दोस्रो पंक्ति कृपया तपाईंहरू गाउनुस् ।'
'बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाउँगी...'
अनि वाद्यवादकहरूले संगीत जारी राखे पनि उनी चुप भए । उनले सोचेका थिए बाँकी शब्दहरू कोरसमा गुन्जनेछन् तर ताल पक्डन नसक्ने गायकले ट्रयाकमा गाउँदा छोडेजस्तो गरी बाजा मात्र बजिरह्यो । उनले फेरि एकपटक आफ्नो अनुरोध दोहोर्‍याए । अब पनि कसैले गाएन भने त बोर हुन्छ भन्ने लागेको हुनाले मेरो उरन्ठ्याउलो जोसले मलाई अभिप्रेरित गरिरहेको थियो । जे पर्ला-पर्ला भन्दै म जोसमा आएर जुरुक्क उठें । मैले दुई हातले आफ्नो मुखको अगाडि ढ्वाङजस्तो बनाएँ । अनुप जलोटाले 'बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाउँगी' भन्न मात्र के भ्याएका थिए लौ खा त यत्रै सित्ति भनेर मैले न्वारानदेखिको बल निकालेर बाँकी गीत चिच्याइदिएँ,
'बित ही जाये चाहे ये सारी उमरिया...'